I-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) I-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Ephreli 10, 2021
Ukuhambisa ama-crossovers amaphakathi kungenye yezinhlobo ezidume kakhulu zesu lokuguqula umkhuba lokuhweba. Lokhu kungenzeka kungenxa yokuthi ilula. Noma ngubani angakusebenzisa kalula ngoba abathengisi benza izinqumo zabo zokuhweba ngokususelwa ekweqeni kwemigqa emibili emaphakathi yokuhamba. Noma kunjalo, ama-crossovers aphakathi nendawo awanembile ngaso sonke isikhathi.
Ama-divergences asuselwa kwi-MACD ngakolunye uhlangothi futhi isu elidumile lokuguqula ukuhweba elivame ukusetshenziswa ngabahwebi abangochwepheshe. Noma kunjalo, abathengisi abaningi bayaqaphela ukuthi i-MACD ingahle isalele emuva kakhulu. Kanjalo, abaningi bangakhetha ukuthola okuhlukile kwe-MACD ene-lag encane.
Lelisu lokuhweba lihlanganisa imiqondo emibili, ukuhamba okuhamba phambili kwe-crossover nokuhlukahluka okususelwa ku-MACD, kusetshenziswa izinkomba ezimbili ezenziwe ngezifiso ezinama-lag amancane uma kuqhathaniswa nezinkomba eziyisisekelo.
Inkomba ye-MA Ribbon
1 Inkomba ye-MA Ribbon
2 MACD 2 inkomba
4.3 Ungayifaka kanjani i-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
Isikhombi se-MA Ribbon siwumkhuba olandela inkomba yezobuchwepheshe esuselwa kumqondo wokuhambisa ama-crossovers aphakathi nendawo, ngakho iziqalo “MA”.
Enye yezindlela abahwebi abakhomba ngayo ukuqondiswa kwemikhuba nokuhlehliswa kwethremu kusetshenziswa iphawundi elijwayelekile elihambayo, lapho omunye wolayini ohamba ngokuhamba uhamba ngokushesha kunenye. Ukuqondiswa kwethrendi bese kutolikwa ngokuya ngokuthi imigqa emibili emaphakathi ehambayo ihlangana kanjani. Ithrendi iyashesha noma nini lapho umugqa wesilinganiso oshesha ngokushesha ungaphezu kolayini ohamba kancane ohamba phambili kanye ne-bearish noma kunini lapho embondele khona.
Empeleni, Ukubuyiselwa emuva kwethrendi nakho kungakhonjwa ngokususelwa ekweqeni kwemigqa emibili emaphakathi ehambayo. Ukubuyiselwa emuva kwe-bullish kukhonjiswa noma kunini lapho umugqa osheshayo ohamba ngokushesha weqa ngaphezu komugqa omaphakathi ohamba kancane. Ngokuphambene, ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish kuboniswa noma kunini lapho umugqa ophakathi nendawo osheshayo weqa ngaphansi komugqa wesilinganiso sokuhamba kancane. Lokhu kubizwa ngokuthi i-crossover yesilinganiso esihambayo.
Inkomba ye-MA Ribbon isuselwa kulo mqondo. Ihlela imigqa emibili emaphakathi yokuhamba engashintshwa ngaphakathi kwezilungiselelo zenkomba. Ngemuva kwalokho ifaka indawo phakathi kwemigqa emibili ukukhombisa ukuqondiswa kwethrendi. Ifiphaza indawo ejulile esibhakabhakeni esiluhlaza okwesibhakabhaka ukukhombisa ukuthambekela okukhona, futhi nsundu nsundu ukukhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Le nkomba ingasetshenziswa njengesihlungi senkomba yokuqondisa lapho abathengisi bengakhetha ukuhweba kuphela kunkomba ekhonjiswe ngombala wendawo ye-MA Ribbon.
Ingasetshenziswa futhi njengesignali yokungena eguqula izinto lapho abathengisi bebezovula khona ukuhweba ngokuqondiswa kokuguqulwa kwethrendi ngokushesha nje lapho umbala womthunzi we-MA Ribbon ushintsha. Le nkomba iyasebenza nakule nhloso njengoba futhi ingathumela izexwayiso futhi icindezele izaziso noma nini lapho imigqa emaphakathi ehambayo iwela.
MACD 2 inkomba
I-MACD 2 Isibonisi i-oscillator esuselwa kumfutho etholakala ku-Classic Moving Average Convergence and Divergence (MACD) inkomba.
I-MACD yakudala iyi-oscillator esezingeni lomfutho ethandwa kakhulu. Noma kunjalo, kuyaziwa futhi ukuthi kunokusilela okubalulekile. I-MACD 2 Inkomba yathuthukiswa ngenhloso yokukhiqiza i-oscillator ye-MACD ene-lag encishisiwe, eqondana ngokusondele kakhulu nokushayiswa kwesenzo sentengo.
Ifana ne-MACD ejwayelekile, i-MACD 2 Inkomba ibala umehluko phakathi kwemigqa emibili emaphakathi yokuhamba, enye ishesha kunenye. Bese uhlela umehluko njengomugqa we-MACD. Iphinde ibalwe isilinganiso esihambayo selayini ye-MACD bese iyakha njengelayini wesiginali ebhangqwe nomugqa omkhulu we-MACD. Indawo ephakathi kwemigqa emibili, ebizwa nge-MACD Cloud, ibese iba nomthunzi ngokuya ngokuthi imigqa emibili igqagqana kanjani. Ifiphaza i-MACD Cloud lime noma nini lapho umugqa we-MACD ungaphezulu kolayini wesiginali, ekhombisa umfutho we-bullish, futhi pink ojulile noma nini lapho umugqa we-MACD ungaphansi komugqa wesiginali, ekhombisa umfutho we-bearish.
Ibala futhi umehluko phakathi komugqa we-MACD nolayini wesiginali namabhilidi we-histogram ngokuya ngomehluko. Umbala wemigoqo nawo uyashintsha kuye ngenani lebha yamanje uma kuqhathaniswa nebha yangaphambilini. Ihlela ibha eluhlaza okwesibhakabhaka ukukhombisa umfutho we-bullish oqinisayo, ibha eluhlaza okwesibhakabhaka ejulile ukukhombisa umfutho we-bullish okhubazekayo, ibha ensundu ukukhombisa umfutho we-bearish oqinisayo, kanye nebha ye-violet ukukhombisa umfutho we-bearish obuthakathaka.
Lelisu lokuhweba isu lokuguqula elithengiswayo elithengisa lapho kuhlangana khona isignali yokuguqula isimo esivela ku-MA Ribbon Indicator kanye nokwehlukana phakathi kwe-MACD 2 Inkomba nesenzo sentengo.
Okokuqala, kufanele sibheke ukwehluka okungaba khona, lokhu kungabonakala ngokuya ngokwehluka kwamandla phakathi kokuphakama kokujikisa nokushona kwesilinganiso sentengo ngokuqhathaniswa neziqongo nokwehla kwe-MACD 2 oscillations. Abahwebi bamane bafanise ukuqhathanisa iziqongo zamanje nezidiphozi neziqongo ezedlule nezidiphozi ku-MACD 2 oscillator nesenzo sentengo.
Lapho nje ukwehlukana kuqinisekiswa, silinda-ke i-MA Ribbon Indicator ukuthi iguqule umbala oqinisekisa ukuguqulwa kwesimo, okungaba yisiginali yethu yokungena kwezohwebo.
Qhathanisa ukwehla kokujula kwesenzo sentengo nokwehla kwe-MACD 2 oscillations futhi ubheke ukwehluka okungenzeka kwe-bullish.
Ifu le-MACD kufanele liguqule libe umcako.
Vula i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho umthunzi we-MA Ribbon ushintsha ube luhlaza okwesibhakabhaka esijulile.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umthunzi we-MA Ribbon ushintsha ube nsundu ngesihlabathi.
Qhathanisa ukuphakama kwamanani entengo yamanani neziqongo ze-MACD 2 oscillations futhi babheke ukwehluka okungenzeka kwe-bearish.
I-MACD Cloud kufanele iguqule ibe pinki ejulile.
Vula i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho umthunzi we-MA Ribbon ushintsha ube nsundu ngesihlabathi.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umthunzi we-MA Ribbon ushintsha ube luhlaza okwesibhakabhaka esijulile.
Lelisu lokuhweba linamandla okuhlinzeka ngezimpawu zokuhweba ezingaholela enkambisweni ende yokusebenza. Lezi zinhlobo zezentengiselwano zingaveza ukuhweba okuphezulu okuzokwenza ngcono izibalo zesilinganiso somvuzo wobungozi we-akhawunti.
Abahwebi kufanele basebenzise leli qhinga kuqala ngaphambi kokulisebenzisa ku-akhawunti ebukhoma ukuze babone kahle izimpawu ezifanele zokuguqula okuhlukile.
I-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela yeMetatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani i-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa i-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy yeMT5.zip
Iya kwesokudla ukukhetha i-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona i-MA Ribbon Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 itholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleI-XWPR Histogram Vol Direct Ixwayisa i-MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoImbondela Ishadi Inkomba MT4